Sat, May 26, 2018 | 15:29:11 NST
पक्राउ पर्ने डरले अमेरिकी पूर्व गुप्तचर बेपत्ता
जेठ २८ – गोप्य फोन र इन्टरनेट विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा परेका अमेरिकी गुप्तचर निकायका पूर्व कर्मचारी हङकङबाट बेपत्ता भएका छन् । स्वदेश फर्काई मुद्दा चलाउने प्रयास भइरहेको बेला २९ वर्षिय एडवार्ड स्नोडेन बेपत्ता भएका हुन् ।
भाजपाका नेता आडवाणीद्वारा राजिनामा
जेठ २७ - भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणीले राष्ट्रिय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड र चुनाव समितिबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।
लिवियाको हिंसात्मक झडपमा २५ को ज्यान गयो
जेठ २६ – लिवियाको बेन्घाँजीमा भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तिमा २५ जनाको ज्यान गएको छ । थुप्रैघाइते भएका छन् । बेन्घाजीमा रहेको शिल्ड बिग्रेड भंग गर्नुपर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप भएको थियो ।
नेल्सन मण्डेला अस्पतालमा भर्ना
जेठ २५ – स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । फोक्सोमा संक्रमण देखिएपछि मन्डेलालाई प्रिटोरियामा रहेको अस्पतालमा भर्ना गरिएको राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले जानकारी दिनुभयो ।
बसमा आगलागी हुँदा चीनमा ४२ को ज्यान गयो
जेठ २५ – चीनमा एउटा बसमा आगलागी हुँदा कम्तिमा ४२ जनाको ज्यान गएको छ । ३० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
पाकिस्तानी सैनिकको आक्रमणमा भारतीय सैनिकको मृत्यु
जेठ २४ - भारत प्रशासित काश्मिर क्षेत्रमा पाकिस्तानी सेनाको आक्रमणमा एक भारती सैनिकको ज्यान गएको छ । काश्मिरको पुन्च सेक्टरको नजिकै पाकिस्तानी सेनाले प्रहार गरेको ग्रिनेड लागेर भारतीय सेनाका सुबेदार बच्चन सिंहको ज्यान गएको हो ।
कुपोषणबाट हरेक वर्ष ३६ लाख बालबालिकाको मृत्यु
जेठ २३ - कुपोषणका कारण विश्वमा हरेक वर्ष ३६ लाख बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ । ल्यान्सेट मेडिकल जर्नलको पछिल्लो अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । पर्याप्त पोषणको अभावमा विश्वमा वर्षेनी ३६ लाख बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
जापानमा बुलेट रेलको परीक्षण
जेठ २३ – जापानले ५ सय किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा चल्ने बुलेट रेलको पहिलोपटक परीक्षण गरेको छ । परीक्षणका लागि ४३ किलोमिटरको ट्रयाक बनाइएको जापानी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
आतंकवादीको बारेमा सूचना दिनेलाई पुरस्कार
जेठ २२ – अमेरिकाले उत्तर र पश्चिम अफ्रिकामा सक्रिय रहेका आतंकवादी संगठनका बारेमा सूचना दिनेलाई पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । आतंकवादी संगठनलाई निस्तेज पार्न अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा पहिलो पटक पुस्कारको घोषणा गरेको हो ।
इजिप्टमा १५ अमेरिकीलाई ५ वर्षको जेल सजाय
जेठ २१ – इजिप्टको अदालतले १५ जना अमेरिकी नागरिकलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । अमेरिकी गैरसरकारी संस्थामार्फत अवैध रुपमा काम गरेको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै अदालतले उनीहरुलाई सजाय सुनाएको हो ।
ताइवानका पूर्व राष्ट्रपतिद्वारा आत्महत्याको प्रयास
जेठ २० - कारबासमा रहेका ताइवानका पूर्व राष्ट्रपति चेन सुइ बियानले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । ताइचुङ्ग जेलमा सजायँ काटिरहेका चेन सुइले शौचालयमा टावलको मद्दतमा आत्महत्याको प्रयास गरेको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन ।
जागिरे आमाका बच्चाले दूध खान पाउँदैनन्
जेठ १८ – रोजगारी जोगाउने दबाबका कारण चिनियाँ महिला आफ्ना नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउनबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ३० प्रतिशत चिनियाँ महिलाले मात्रै पहिलो ६ महिनासम्म आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराउन पाउने गरेका छन् ।
अमेरिकाले सञ्चार उपकरण बिक्रीको प्रतिबन्ध हटायो
जेठ १७ – अमेरिकाले इरानी नागरिकमाथि सञ्चार उपकरणको बिक्रीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । कडा सरकारी नियन्त्रणबाट इरानी नागरिकलाई मुक्त गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रतिबन्ध हटाउँदै इन्टरनेट सेवा र सामाजिक सञ्जाल पहुँच खुला गरेको अमेरिकी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
रुसद्वारा सिरियालाई एन्टी एअर क्राफ्ट मिसाइल प्रदान
जेठ १६ – रुसले सिरियालाई अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध गराएको छ । युरोपेली युनियन इयुले सिरियाका विपक्षीमाथि हतियारको प्रतिबन्ध हटाएलगतै रुसले हतियार दिएको हो ।
‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाको क्षमतामा ध्यान देउ’
जेठ १६ – राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको असक्षमतामा भन्दा उनीहरुले हासिल गर्न सक्ने उपलब्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
दिल्लीमा माओवादी आक्रमणको खतरा !
जेठ १६ – भारतको राजधानी नयाँदिल्ली लगायतका मुख्य शहरमा माओवादीले आक्रमण गर्ने सम्भावना बढेको सुरक्षा निकायले दावी गरेका छन् । आउँदो महिनामा मुख्य शहरका सुरक्षाका हिसाबले कमजोर ठाउँमा आक्रमण गर्ने तयारी गरेको सुरक्षा निकायको ठहर छ ।
म्यानमारमा फेरि साम्प्रदायिक हिंसा
जेठ १५ – म्यानमारमा फेरि साम्प्रदायिक हिंसा चर्किएको छ । बौद्ध धर्म मान्ने महिलामाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको हल्ला फैलिएपछि भएको झडपका क्रममा एउटा मस्जिद, स्कुल र मुस्लिम नागरिकले सन्चालन गरेको पसलमा आगजनी भएको बिबिसीले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियाका वासिन्दा सबैभन्दा सुखी
जेठ १४ – अष्ट्रेलिया लगातार तेश्रो वर्ष विश्वका सुखी देशको शीर्ष स्थानमा पर्न सफल भएको छ । फ्रान्सको आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले तयार पारेको उच्चतम जीवन सुचकांकमा अष्ट्रेलिया लगातार तेश्रोपल्ट शीर्ष स्थानमा परेको हो ।
इयूले सिरियाका विद्रोहीलाई हतियार प्रतिबन्ध हटाउने
जेठ १४ – युरोपेली युनियन इयूले सिरियाका विद्रोहीलाई लगाएको हतियार प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ । ईयूका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा प्रतिबन्ध नवीकरण नगर्ने सहमति भएको हो ।
फ्रान्समा समलिङ्गी विवाह संबन्धि कानुन विरुद्ध प्रदर्शन
जेठ १३ – फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कानुनको विरोधमा झण्डै डेढलाख मानिस सडकमा उत्रिएका छन् । तर प्रदर्शनकारीले भने झण्डै दश लाख मानिस सडकमा उत्रिएको दावी गरेका छन् ।
जेठ ९ – अधिकारवादी समूह एमनेष्टी इन्टरनेशनलले विश्वका धेरैजसो देशमा सरकारहरुले संकटकालीन स्थितिमा हस्तक्षेप नगर्दा मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
चिनियाँ र भारतीय प्रधानमन्त्रीवीच भेटवार्ता
जेठ ६ – तीन दिने भारत भ्रमण रहेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि केचियाङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच भेटवार्ता भएको छ । सीमा विवाद र परस्पर कुटनीतिक तनावका बीच भएको लिको भारत भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि भारत भ्रमणमा
जेठ ५ – चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि केचियाङले आइतबारदेखि भारत भ्रमण सुरु गर्नु भएको छ । सीमा विवाद र परस्पर कुटनीतिक तनावका बीच भएकको लि को भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
पाकिस्तानको तहरिक ए ईन्साफ पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्षको हत्या
जेठ ५ – पाकिस्तानकी महिला नेतृ जाहरा शाहिद हुसैनको हत्या भएको छ । तहरिक ए ईन्साफ पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुसेनलाई शनिबार राति कराँचीमा उहाँको घरबाहिर गोली हानी हत्या गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
कुरान अपमान गरेको भन्दै चिनियाँमाथि कुटपीट
जेठ ४ – कुरानको अपमान गरेको आरोपमा पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा एक जना चिनियाँ नागरिकमाथि कुटपीट भएको छ । काश्मीरमा बाँध निर्माणमा संलग्न लि नाम गरेका चिनियाँ नागरिकलाई स्थानीय केही व्यक्तिले आक्रमण गरेका प्रहरीले जनाएको छ ।
विदेश घुम्दा सभ्य बन्न चीनको आग्रह
जेठ ४ – चीनले विदेश यात्राका क्रममा विनम्रतापूर्ण व्यवहार देखाउन आफ्ना नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ्ग याङ्गले केही चिनियाँ पर्यटकको असभ्य व्यवहारका कारण देशको छविमा नोक्सान पुगेको भन्दै व्यवहार सुधार्न आह्वान गर्नुभएको हो ।
इरानमा महिलाले राष्ट्रपतिको उमेद्वार बन्न नपाउने
जेठ ३ – इरानमा आउँदो जुन १४ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा महिलाले उमेद्वारी दिन नपाउने भएका छन् । अरु मुस्लिम देशको तुलनामा इरानमा महिलालाई स्वतन्त्रता दिइएपनि राष्ट्रपति बन्ने ढोका भने संविधानले बन्द गरेको छ ।
आँधीको खतराले लाखौं विस्थापित
जेठ २ – महासेन नामको सामुद्रीक आँधीको खतरा बढेपछि बंगलादेश, भारत र म्यानमारको तटीय क्षेत्रका लाखौं नागरिक बिस्थापित भएका छन् । बंगलादेशमा मात्रै १० लाख जनाले आफ्नो घर छोडेका छन् ।
सडकमै विमान दुर्घटना, ४ को मृत्यु
पुस १४ - रसियामा एउटा जहाज सडकमै दुर्घटना हुँदा कम्तिमा पनि ४ जनाको ज्यान गएको छ । मस्कोमा एक एयरपोर्टको धावनमार्गबाट चिप्लिएर विमान सडकमा खसेको थियो । रेड एयरको विमान के कारणले दुर्घटना भएको हो भन्ने खुलेको छैन । विमानमा १२ जना यात्रु थिए ।
वंगलादेशको दक्षणी तटमा सामुद्रीक आँधी
जेठ २ – महासेन नामको सामुद्रीक आँधी बंगलादेशको दक्षिणी तटमा पुगेको छ । १ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको आँधी पटुआखाली जिल्ला हुँदै चिटगाँव र कक्स बजारतर्फ अघि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
ताइवानले फिलिपिन्सबाट राजदुत फर्कायो
जेठ १ – ताईवानले फिलिपिनी श्रमिकलार्ई काममा राख्न रोक लगाउनुका साथै आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ ।
रुसमा अमेरिकी गुप्तचर पक्राउ
बैशाख ३१ – अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएका एक सदस्य रुसको राजधानी मस्कोबाट पक्राउ परेका छन् । रुसी गुप्तचर संस्थाका अधिकारीलाई सिआइएमा भर्ती गर्न खोजेको आरोपमा मस्कोमा रहेको अमेरिकी दुतावासका अधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।
दोश्रो विश्वयुद्धमा २ लाख महिला यौनदासी !
बैशाख ३१ – दोश्रो विश्वयुद्धका बेला महिलाको प्रयोग सम्बन्धि अभिव्यक्तिका कारण एक जना जापानी राजनीतिज्ञ विवादमा तानिएका छन् । ओसाकाका मेयर तोरु हाशिमोतो महिलाहरुले सहज रुपमा सैनिकहरुलाई आरामको अवसर दिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा पर्नुभएको हो ।
चीनमा मानवअधिकारको पूर्ण रक्षा
बैशाख ३१ – चीनले जनजीविकामा सुधारको माध्यमबाट मानवअधिकार रक्षामा प्रगति गरेको दावी गरेको छ । मानवअधिकारको स्थिति सम्बन्धि श्वेतपत्र जारी गर्दै चीनले नागरिकको जीवनयापनको स्थितिमा लगातार सुधार हुँदै गएको दावी गरेको हो ।